Qof walba raaxaystaan ​​dhagaysiga ringtones funny telefoonka. Ringtones Kuwaas oo lagala soo bixi karaa websites badan iyo barnaamijyadooda heli karaa internet-ka. Waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ku maqli aad ringtones gaar ah u ciyaaro marka saaxiibkaa ku baaqay in adiga ama laga yaabaa in aad rabtid in aad ka ringtone SMS ugu fiican ama alarm ringtone. Wax kasta oo sababaha yihiin, waxaa jira bogag badan iyo dalabaad badan oo la soo saaray si aad u hesho ringtone aad ugu jeceshahay.
Qeybta 1: Top 10 Shabakadaha in Download Qosol Ringtones
Qeybta 2: Top 5 Apps u iPhone in Download Qosol Ringtones
Qeybta 3: Top 5 Apps u Android inay Download Qosol Ringtones
Qeybta 4: Top 50 Funny Ringtones
Liiska waxa ku jira internetka ugu sareeya halkaas oo aad ka soo dejisan kartaa ringtones funny ee telefoonada aad. Waxaan ka mid ahaa shaashadda website si aad u barato oo ku saabsan sida websites kuwaas oo u muuqataa haddii aad doonayso inaad soo booqato ah. Waxaan sidoo kale ka mid xiriir ah in ay internetka. Ogaaw in aad xor in guji links haddii aad rabto in aad gashid goobaha kuwa.
Boggan waxa uu kuu ogolaanayaa inaad soo bixi ringtones funny lacag la'aan ah si aad u iPhone. Waxay leedahay app web gaare ringtone ah, qalab raadinta si aad u heshid ringtone si fudud. Waxay dadka u saamaxaaya in ay u arkaan ringtones heli karaa by category sida funny iwm qoob ka ciyaarka,
goodies xiiso leh u ah iPhone
ma u baahan yihiin si ay u abuuraan xisaab
ayaa wallpaper free
ringtones xadidan marka loo eego goobaha kale
Boggan waxa uu bixiyaa lacag la'aan ah ringtone download aad iPhone. Miyuu doorashada weyn ee qaybaha in lagala soo bixi karaa music oo ay ku jiraan oo lacag la'aan ah, app, ringtones iPhone, sawirada iyo ciyaaraha.
wax soo bixi liisan
No lacagta Times ama kharashka ku maqan
sababtoo ah qaybaha weyn, naf dhibkeed goobta si tartiib tartiib ah
Mareegtan ayaa soo bandhigaysa ringtones lacag la'aan ah lagu basaasay karaa iyada oo filtarrada, tags ama Author cusub ka, ciyaarin ama ugu caansan. Waxay bixisaa ikhtiyaar ah u diraya ringtone ama duuban.
Miyuu app lagu taageeraa macruufka, Android iyo Windows Phone
Miyuu qaybaha badan oo ay ku jiraan filimada, clips, saamaynta iyo music asalka ah.
diiwaangelinta waa waajib ah si ay u isticmaalaan goobta
Waxaad kala soo bixi kartaa this site ringtones badan abuuray xubnaha ka diiwaan gashan ee this site. Waxay ka kooban tahay qaybaha badan oo ay ku jiraan filimada, clips, saamaynta iyo music asalka ah. Boggan waxa uu leeyahay qalab online oo awood u isticmaala inay qorshayso ringtones ay jecel yihiin daqiiqado yar gudahood.
Waxay ka kooban yihiin user abuuray ringtones
Interface oo quruxsan oo casri ah
waa in aad iska diiwaan this site si loo abuuro iyo geliyaan ringtones adiga kuu gaar ah
Boggan waxa uu leeyahay malaayiin ringtones iPhone si xor ah u dejisan. Waxa kale oo uu leeyahay goodies iPhone xiiso leh oo kale sida mawduucyada iyo wallpapers.
diiwaangelinta ma loo baahan yahay si ay u helaan qalab ee this site
Malaayiin ka mid ah maaddooyinka soo bixi free
ayaa qaybaha ku koobnayn
Boggan waxa uu leeyahay ururinta ugu xiisaha badnaa oo kulul ee ringtones ee telefoonada taageeraya qaabab MP3.
ayaa ururinta asalka ah ee ringtones funny
PHO kaliya ku haboon telefoonada ee taageera qaab MP3
The clips funny at this site waa yar yihiin
Boggan waxa uu leeyahay ringtones funny lacag la'aan ah si ay u download category phone kasta. Miyuu noocyo badan iyo qaybaha uu ka soo xusho oo ay ku jiraan dhawaaqyo qosol, clips funny, music funny, ringtones funny iwm
waxaad gali kartaa oo ringtones la wadaag saaxiibadaada
qaybaha badan oo ka mid ah content funny
ringtones taageero la mp3 qaab oo kaliya download
waxaa ku jira qalabka oo aan ruqsad
Miyuu noocyo kala duwan oo ay ka mid yihiin ringtones, Oo dhagax weyn, qoob ka ciyaarka, Oo dhagax weyn classic, pop, rap, soundtrack iyo kuwa kale. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa sare boqol ringtones per category. Boggan waxa uu leeyahay app gacanta qalabka macruufka iyo Android. App Tani users u saamaxaaya in ay abuuraan ringtones ka heeso iyo sidoo kale iyaga oo si toos ah u soo bixi in taleefannadooda.
ayaa qaar badan oo qaabab download file M4R sida loogu iPhone iyo MP3 version ee telefoonada kale
qaybaha badan oo ka mid ah ma ahan oo keliya ka kooban funny, laakiin sidoo kale dhagaxa weyn, qoob ka ciyaarka, Oo dhagax weyn classic, pop, rap, soundtrack oo ku jira
xiriir badan download in aad qaadan doonaa Ringtone goobaha reseller
Hayso codadka ee ringtones lacag la'aan ah download. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala si ay u geliyaan iyo edit ay files audio si ay u abuuraan ringtones u taleefannadooda. Waxaad kala soo bixi kartaa ringtones aad qaabab kala duwan. Mid ka mid ah sidoo kale ka heli karaan ugu sareeya 50 cusub downloads.
waxay bixisaa fursad u ah in la abuuro ringtones ka songs kaydiyaa telefoonka
waxay bixisaa qalabka asalka
fududahay in la isticmaalo interfaces
qaar ka mid ah content in this site oo aan ruqsad
Goobta Tani waxay u ogolaaneysaa dadka isticmaala si ay u abuuraan ringtones oo music u gaar ah ay ka music ku kaydsan ku shubtaan taleefanadooda iyagoo sidoo kale u ogolaanaya inay soo dejisan ee ringtones abuuray in taleefannadooda. Bogga waxaa kaloo uu leeyahay noocyo kala duwan oo ringtones iyo barnaamijyadooda u phone kasta. Waxay leedahay qalab raadinta Author ka ringtones ugu dhawaan ku daray, ugu sareeya 5o ringtones, wallpapers iyo barnaamijyadooda, waayo telefoonka ah.
Easy in ay isticmaalaan internetka ringtone qalab abuurka
ayaa noocyo kala duwan oo ka kooban lacag la'aan ah
ayaa dhowr qaabab download phone android kaliya
waa in aad iska diiwaan gelin ah si ay u isticmaalaan goobta
Liiska waxa ku jira ugu sareysa 5-ada meesha aad kala soo bixi kartaa ringtones funny for qalab mobile iPhone. Waxaan sidoo kale ka mid link ah meesha aad kala soo bixi kartaa Chine kuwaas.
Kharashka app iPhone Tani US $ 0.99. Waxay leedahay mid ka mid ah interfaces tafatirka ugu wanaagsan marka loo eego in ay barnaamijyadooda kale. Waxaa dadka isticmaala si ay u abuuraan awood u ringtones ka heeso iyo sidoo kale iyaga oo si toos ah u soo bixi in taleefannadooda. App Tani sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in la abuuro kumanaan ringtones gudahood daqiiqo ah.
Waa sahal in la saxaa music galay ringtones iPhone
Taageero App Tani labada files audio iyo video
No helay qasba
App Tani waxay ka caawisaa dadka isticmaala si ay u abuuraan ringtones ay iPhone u gaar ah. Its qiimaheedu waa ku dhawaad ​​$ 0.99 oo doolar. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala si ay u sameeyaan kumanaan ringtones caadadii isticmaalaya muusig ka iPhone. Waxad abuuri kartaa iPhone ringtones ilaa 40 ilbiriqsi
fudud in la isticmaalo app
Caadadii Limited ringtones abuurka
waa in aad u hagaagsan oo Lugood marka aad iPhone wareejinta ringtones aad
Tani waa app kale oo kaa caawin kara inaad la abuuro ringtones kuu gaar ah oo iyaga lagu wareejiyo si aad iPhone. Users abuuri karaan caadadii ringtones aan xad lahayn u gaar ah call kasta ama la xiriir. Waxad abuuri kartaa ringtones iPhone ilaa 40 ilbiriqsi.
App Tani waxaa loogu talagalay labada iPhone iyo iPad
La jaan qaada afaraad ee jiilka iPod taabashada,
aad ringtones aad saaxiib la wadaagi karaan
waxa run ahaantii waa app saaxir la lahayn khasaaraha sheegay a
Tani app qiimaha iPhone qiyaastii $4.99 oo doolar. Miyuu interface aad u fiican oo ka caawisaa dadka isticmaala si ay u abuuraan ringtones caado u iPhone ay. Iyadoo app iPhone tan, waxaad samayn kartaa ringtones aan xad lahayn oo diri ringtones in saaxiibadaa dhex email. Waxa kale oo aad ku eegaan karo ringtones markuu iyagii sixiddiisa. Waxad abuuri kartaa iPhone ringtones ilaa 40 ilbiriqsi
ayaa tababare file nidaamsan ee maaraynta ringtones ah
interface aad u fiican
Waxaad ku eegaan karo ringtones markuu iyagii sixiddiisa.
waa aad u qaali ah si ay u iibsadaan
Kan sameeyey 5. Ringtone
Kharashka App Tani ilaa $ 0.99 oo doolar. Waxay ka caawisaa dadka isticmaala si ay u abuuraan ringtones caado u iPhone ay. Iyadoo app iPhone tan, waxaad samayn kartaa ringtones aan xad lahayn oo diri ringtones in saaxiibadaa dhex email. Waxa kale oo aad ku eegaan karo ringtones markuu iyagii sixiddiisa.
isticmaali makarafoonka si ay u abuuraan ringtones caado aan xad lahayn
ayaa qaababka fiican sida ka baxeysa ee waxay u engegi doonaan baxay
ay interface noqon kartaa adag marka la isticmaalayo
interface ma aha oo quruxsan sida barnaamijyadooda kale ee lamidka ah
Liiska waxa ku jira ugu sareysa 5-ada meesha aad kala soo bixi kartaa ringtones funny for qalab mobile android. Waxaan sidoo kale ka mid link ah meesha aad kala soo bixi kartaa Chine kuwaas.
App Taasi waxay kaa caawinaysaa in la shakhsiyeeyo ringtones aad u telefoonka aad android. Waxay kaa caawin karaan inaad u yeelaan ringtone kala duwan wicitaanada ama xiriirada. App wuxuu kuu ogolaanayaa user si ay u helaan in ka badan 400 oo ringtones funny ku shubtaan taleefanadooda iyagoo android.
350 ringtones funny marka la barbar dhigo in ay barnaamijyadooda kale in uu leeyahay ka yar
Aqonsado Full iyo interface oo quruxsan waa u fududahay in la isticmaalo
waxa aanu ku jira content badan marka loo eego in ay barnaamijyadooda sida Ringdroid
2. Free Ringtones u Android
App waxa uu leeyahay ururinta weyn ee ringtones u telefoonka aad android. Ringtone ayaa lagala soo bixi waxaa loo isticmaali karaa sida Message Short Text dhawaaqa, Yeedhe sanqadha ama codka alarm. App waxa uu leeyahay waxyaalo badan, si dhab ah loo arko mid ka mid ah app ugu fiican ee androids ka dib markii Ringdroid.
Easy in ay helaan buuga
loogu talagalay saacad u saamaxaya in ay waqti si song joogto ah ka ciyaari kara waqti cayiman gudahooda
ma ringtone abuurista caadadii kaliya degsado
Kan sameeyey 3. Ringtone
Tani waa app ugu fiican ee la abuurayo ringtones u telefoonka aad android. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala si ay u geliyaan music kaydsan telefoonada iyo iyaga astaysto si ay u abuuraan ringtones.
Waxaad qabsato kartaa mugga ringtone ah iyadoo la abuurayo
Waxaad ringtone la via email saaxiibo aad la wadaagi karto
Waxaad Mozilla kartaa file music ah
Miyuu fudud ah si ay u isticmaalaan interface
ma qasbaan helay
App Tani waxay bixisaa ringtones ku tilmaamay iyo asalka aan xad lahayn labadaas arrimood oo lagala soo bixi karaa lacag la'aan ah. Miyuu ururinta weyn ee qaybaha ay ka mid yihiin alaabtii muusikada, ringtones funny, ringtones phone jir, ringtones dhamaatay iyo qaar badan.
ayaa feature rating ah
qaybaha weyn illi
ayaa doorasho Falanqeynta kuu ogolaanaya inaad si ay u dhagaystaan ​​ringtone ka hor soo degsado
cillado ma cad
Tani waa codsi il furan in waddaa on OS ee Android. App Tani users u saamaxaaya in ay u qoraan iyo edit files audio in loo isticmaalo ringtones qalabka android. Waxay leedahay badhamada fiican in la bilaabo Play, Back iyo ciyaaraha Forward. Ku dhowaad 50 milyan oo isticmaala ayaa lagala soo bixi app this sababtoo ah qaababka ay.
Si fudud u astaysto files audio aan xad lahayn si deg deg ah
Codsi fasax The app ka isticmaala si ay u helaan qorin
app this had iyo jeer ka yar yahay horumarinta. Sidaas had iyo jeer aad u baahan tahay waa in hadda iyo mar kale u cusboonaynta
Kuwaas oo ah kuwa ugu sareeya 50 ringtones funny bixi karo ee telefoonada aad. Waxay ka kooban yihiin dhawaaqyo tayo sare leh oo loo isticmaali karo sida ringtones, dhawaaqa digtoonaanta, farriimaha ama ringtones SMS. Liiska ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah link ah meesha aad kala soo bixi kartaa lacag la'aan ah oo wakiil ka ah ugu qosol iyo codadka ugu kulul.
1 Sida ku xayiran Glue Download Link 26 Kabaha On Download Link
2 Malaa'ig noo ka mid ah Download Link 27 Waa hagaag V2 Download Link
3 Waxay Country V2 Download Link 28 Aad ka tirsan tahay Me V6 Download Link
4 Waxaad iigu ka Hello Download Link 29 Waxay My noocee ah Crazy Download Link
5 Suulasha V8 Download Link 30 Heartless V9 Download Link
6 Cowgirls Ha qayli Download Link 31 Redneck Haweeney V6 Download Link
7 International goostay Download Link 32 Qaado Job iyo tuurid Waxaa Download Link
8 Waa Your Love Download Link 33 Bluegrass Mountain waa qaraw Download Link
9 Ma waxaad ka qeybiso Me ama ma V4 dhunkada Download Link 34 Country Girl (jaf Waxaa Wixii Me) Download Link
10 Country dhashay Download Link 35 Crazy Download Link
11 Titties iyo Bi'ir Download Link 36 Ku haysataa wax kasta oo ay Ma Download Link
12 Ha soo noqnoda V2 Download Link 37 Pontoon Download Link
13 Wax kasta Waa V4 Download Link 38 Just waxaan idiin ku yeedhi Mine Download Link
14 Smile Download Link 39 I jeclaa, i jeclaa V3 Download Link
15 Ma doonayo in aan caawa si ay u Dhamaato Download Link 40 Duulnaa Download Link
16 Firecracker Download Link 41 On Mar Road ayaa Download Link
17 Sababta oo ah waxaad ka Download Link 42 Crazy Girl V2 Download Link
18 Miyaan V2 Download Link 43 Dareemaan in Naarta V2 Download Link
19 Siddeed Labaad Ride Download Link 44 Ninkii ugu weynaa Waligay ma ogayn Download Link
20 Waqtiga Good Download Link 45 Waxaan ahay Alive V4 Download Link
21 Waxaad iga Download Link 46 Just Dream A Download Link
22 Waxay Wax walba oo igu Download Link 47 Livin Our Love Song Download Link
23 Tilmaamaha Good V2 Download Link 48 Jeclaada, Ha Live Halkan Download Link
24 Save A Horse Ride A eekeysiiya Download Link 49 Wax u eg in Download Link
25 Ma waxaad ka qeybiso i dhunko Ama Aan Download Link 50 Eekeysiiya Casanova V5 Download Link
> Resource > Video > Top 20 Shabakadaha Internetka iyo Apps in Download Qosol Ringtones